Bluecore Yechokwadi-Nguva Yekutonga Platform yeTail | Martech Zone
Bluecore Yechokwadi-Nguva Yekutonga Platform yeTail
Svondo, July 9, 2017 Chipiri, August 18, 2020 Douglas Karr
Ndiwe mushambadzi. Chii chauri kuzoita zvinotevera? Uyu mubvunzo vatengesi vanozvibvunza ivo nguva dzose. Dhata ikozvino yave kuyerera mumasangano nekurekodha kumhanya uye vhoriyamu, uye maitiro ekuronga nekuita pane iyi data anogona kunge achiremadza.
Kutanga, iwe unosungirwa kuziva zvinhu zvakasiyana nezve vako vatengi:
Ndivanaani vatengi vangu vanokosha kwazvo?
Ndivanaani vatengi vangu vanongotenga zvinhu zvakadzikiswa?
Ndeapi vatengi vandiri kuda kurasikirwa?
… Uye rondedzero inoenderera.
Kana iwe uchikwanisa kuunganidza yakawanda-chiteshi dhata uye unonzwisisa kuti ndiani ari mune yako mutengi base, chii chaunoita unotevera neruzivo irworwo? Kureva, unoita sei nazvo? Iyi ndiyo hurongwa hwako hwevezvenhau: Ndiani waunonangisa, kuburikidza nenzira dzipi dzaunotaurisa iwo mameseji uye unoita riini iwe? Uku kudzika kwezivo, njere, uye kugona hazvisvikike kune vazhinji vatengesi.
Mukupindura kudzvinyiriro iyi indasitiri, Bluecore, ane makore mana okuberekwa SaaS tekinoroji mupi, akazivisa Itsva Sarudzo Platform yevatengesi kuti vabatsire kupindura mubvunzo we "chii chinotevera?" Yayo imwechete inosimudzira inoshambadzira vatengesi kuti vagadzirise data uye vagadzire vateereri munzira dzese, pasina IT kubatanidzwa.
Tiri kurarama munyika yekukurumidza kugutsikana uko vashambadzi vasina humbozha hwenguva. Speed ​​uye chaiyo-yenguva nzwisiso ndiwo makiyi ekutyaira kutora, kutendeuka uye ekuchengetedza metric munzvimbo yanhasi yemakwikwi yekutengesa. CRM uye analytics zvishandiso zvinopa vatengesi kugona kuunganidza ruzivo nezveichi chinangwa, asi kungounganidza data hakuitise mhedzisiro.
Vatengesi vevatengesi havadi imwe data kana maturusi matsva ekubatanidza data. Ivo vanoda rubatsiro rwekutsanangudza mafambiro mune yavo data uye ivo vanoda maturusi ekushandisa ekushandisa iyo data. Ipa simba zvikwata zvako kuti zviite pane izvo zvavanoziva nezve ako vatengi kuitira kuti iwe ugadzire zvinonyatsoitika zviitiko panguva dzakakodzera panguva yerwendo rwekutenga.
Vatengesi havadi imwe data. Ivo vanoda rubatsiro kuishandisa - ndicho chinhu chisipo mune yanhasi yekushambadzira. Isu takagadzira chikuva chedu chekubatanidza zvisina musono mukati mekuvapo kwekushambadzira masiteki, pasina rubatsiro rweIT zvikwata, uye neyakareruka mushandisi interface kuti vatengesi vagone kuvaka uye kuyananisa vateereri mumatanho mune imwe nyaya yemasekondi. Fayez Mohamood, co-muvambi, uye CEO weBluecore
Seye nyama inosanganisirwa mune yako yekushambadzira, Bluecore's Sarudzo Platform isingabatanidze masosi e data, seCRM, chigadzirwa katalog uye eCommerce chikuva, ine chiteshi matekinoroji ayo anotaurirana zvakananga nevatengi vako. Mukuita kudaro, chikuva chinogadzira yakakura data maseti mumasekondi, ichiita kuti iite nekukurumidza kune vashambadzi kuvaka vateereri, izvo zvinogona kusanganisira vatengi vako vanonyanya kukosha, vatengi vekudzikisira, vatengi vari kuda kukonama. Vatengesi vanogona kuendesa mishandirapamwe munzira dzakadai seemail, zvemagariro, zvekutsvaga uye zvepaiti.
Tora Bluecore Sarudzo Platform Demo
Ngatitorei mumwe muenzaniso kubva kune yepasirese yemitambo shangu uye mutengesi wenguo:
Seimwe yevakuru vepasirese dhizaina, vashambadziri uye vanogovana kugwinya uye shangu dzehupenyu, zvipfeko nemidziyo, ichi chiziviso chepasirese chakazivikanwa kwenguva refu nekutungamira kwemaitiro edhijitari uye nekupa vateereri vayo zviitiko zvechokwadi - zviri muchitoro nepamhepo. Asi sezvazviri kune vazhinji vevatengesi vepamhepo, kunyanya avo vanobva kumasangano makuru ane zvivakwa zvakaoma, kuwana nekuita nekukurumidza pane data revatengi zvakaratidza kunetsa kukambani.
Kuti akunde dambudziko iri, mutengesi akatendeukira kuBluecore ku:
Ongorora uye sarudza manera ehukama hwevatengi uchishandisa chaiyo-nguva vatengi data
Tumira maemail akasarudzika akasarudzika, zvemagariro midhiya, kuratidza kushambadza uye zviitiko zvepaiti
Zivhura zvinoitika zvevatengi zvinogoneka uye gadzira vatengesi-vakasarudzika vateereri mumasekondi zvichienderana nenhoroondo dhata uye yekufungidzira algorithms
Kurumidza kuyananisa vateereri paemail, pasocial uye onsite chiteshi kumhanya echokwadi akawanda-chiteshi kushambadzira mishandirapamwe pasina tasking iyo IT department
Pamberi peBluecore, isu takanga tisina kukwana kwakakwana kune yedu data yevatengi. Hatina kukwanisa kuishandisa nyore kana kutora zviito kubva pairi. Takaona Bluecore yaisakwanisa chete kutibatsira kugadzirisa dambudziko iri, asi rinogona kugadziriswa pasina kuremedza dhipatimendi repasi rose reIT. Iyi yaive nzvimbo hombe yekutengesa kwatiri, sezvo Bluecore's inoshanduka uye nyore kushandisa interface inotibvumidza isu kuchengeta macampaign edu ekushambadzira kwaanofanirwa kunge ari - mukati mebazi rekushambadzira, kwete mumaoko ebazi redu reIT. Kugona kudzosera kudzora kwedu mishandirapamwe yekushambadzira yaive yakakura. Hatina kuona chikuva ichi chiri nyore kushandisa kana kukurumidza kuita mune chero chishandiso kusvika zvino. Mutengesi Mukuru weCRM
Mutengesi iye zvino anoshandisa iyo Bluecore Sarudzo Platform kukurumidza kuongorora uye kusanganisa data, kuunza vateereri mumasekondi uye nekuita macross-chiteshi mishandirapamwe kutenderedza zvigadzirwa zvitsva. Kunyanya, iyo mhando yakabatsirwa kubva kumatatu ekushandisa ekushandisa:
Kuwedzera Kushambadzira Kudzora Pamusoro uye Kuwana Dhata
Asati ashandisa Bluecore, kuumbwa kwemushandirapamwe weemail kwaida kubatsirwa nedhipatimendi rekambani yeIT uye kwaigona kutora chero mazuva kubva pamakumi mana kusvika pamazuva makumi matanhatu kutanga. NaBluecore, zvakadaro, timu yekushambadzira inogona kuyedza nekushandisa yakanangwa kusiiwa uye hupenyu hwehupenyu hwakakonzera makwikwi emaimeri mumazuva.
Kunze kwekubatsira kudzivirira nguva inopedza uye yakaoma kusangana kweIT, Bluecore yakaitawo kuti zvive nyore kumutengesi kubatanidza mishandirapamwe iyi nevamwe vezve tekinoroji. Semuenzaniso, timu yekushambadzira inogona kutora mushandirapamwe wakanangwa nevatengi vepamusoro-soro mumaguta akakosha (kureva Boston, New York City, Los Angeles) uye kusanganisa iyo data neHandstand Fitness App yekupa vatengi muzvikamu zvemahara nzvimbo yemahara yekudzidzira yega .
Mhedzisiro mhedzisiro yekuedza uku yaisanganisira:
Iko kugona kwekuti vatore vatengi vakawanda pawebhu uye nekutanga mamwe ekumisikidza mishandirapamwe neBluecore kana ichienzaniswa neiyo mutengesi's yapfuura chikuva, SaleCycle
Yepamusoro yakavhurika uye tinya mitengo neBluecore pane neSareCycle, pakupedzisira ichitungamira kudzoka pane kudyara kwe10: 1
Kuvandudza Omnichannel Brand Kukwidziridzwa
Mutengesi paanoona kukosha kwekuronga kutaurirana kusingachinjike mumakiteshi, zvakatendeukira kuBluecore kuti ibatsirwe. Iyo mhando yakamedza yayo omnichannel kusimudzira kwekuedza pamwe nekumisikidzwa kweshangu nyowani mumutsara unozivikanwa weanomhanya shangu. Kutanga, kambani yakashandisa Bluecore's Sarudzo Platform kuvaka chaiyo-nguva vateereri vevatengi vane hushamwari hwekutenga zvigadzirwa kubva kumutsara weshangu. Iyo yakabva yaendesa yakasarudzika, onsite ruzivo kune vateereri ava vachishandisa Bluecore kushanda zvisina mushe pamwe neesite yekuzvimiririra mapuratifomu uye kugadzirisa peji rekutanga rekugadzira pane-iyo-kubhururuka kuratidza shangu nyowani uye zvimwe zvigadzirwa kubva kumutsara mumwe chete. Iyo kambani yakatorawo izvi kuyambuka-chiteshi nekushandira zvakafanana zvigadzirwa zvekugadzira mukati me Facebook kushambadza uye kuburikidza neemail kushambadzira mishandirapamwe kune avo vatengi vane hushamwari hwehukama hwekutenga sezvinoonekwa neBluecore
Kuti uwedzere hupenyu hwekuratidzira zviitiko uye chengetedza zvemukati zvevatengi vepamusoro-soro, timu yakaunzawo kurudziro yakakosha yekudzokorora vashanyi nevatengi vanogamuchira yechipiri-yekubata mameseji ayo akapa pachena kupinda mune imwe yekambani zviitiko zvepasirese.
Iyo 76% inosimudza pamabhatani ezvinyorwa zvemunhu
Kuwedzera kushandurwa neanopfuura makumi matatu muzana pakusiya kwengoro kumishandirapamwe yaisanganisira yekuwedzera kukurudzira kwekupinda chiitiko chemahara
Kuziva Vateereri Vatsva Ku Target Pakati PeMikana
Bluecore yakabatsirawo mutengesi nechirongwa chekukudza vateereri vake pazviteshi zvitsva nekumhanyisa mushandirapamwe wakasungirirwa mukutanga kwechigadzirwa chitsva. Ichishandisa Bluecore's chaiyo-nguva Sarudzo Platform, kambani yakavaka vateereri vevatengi vakaona chigadzirwa chitsva mukati memazuva makumi matanhatu apfuura asi havana kuzvitenga nekuvatarisa kuburikidza ne Facebook ads.
Pakazara, Bluecore's Decisioning Platform yakabatsira timu yemutengesi iyi kutora data revatengi, kuita kuti iyo data iitwe uye ishandiswe nenzira ine hungwaru, yakasarudzika yekuvandudza mashandiro mumatanho. Kubva achishanda neBluecore, mutengesi adzidza kuti kuzadzikisa mhedzisiro iyi hakusi kwekuwana makomo e data revatengi munzvimbo imwechete. Asi, ndezve kuunza danho rekutora pane zvekuita nezvose izvi zvimiro muchikuva chimwe chete.
NeVateereri Maonero, eCommerce vashambadzi vanowana mukana kune iyo indasitiri inokurumidza uye yakadzika-yakadzika-dashibhodhi yehunhu- uye chigadzirwa-based insights kune chero chikamu chevateereri chavanosarudza kugadzira. Kamwe kana mushambadzi akagadzira vateereri mukati meBluecore, ivo vanogona ikozvino kuwana Vateereri Maonero ekuti vafungidzire kuti chimwe chikamu chakafanotaurwa kuita nekushandura, uyezve vozoita mishandirapamwe nehurongwa hwekuwedzera mhedzisiro.
NeVateereri Maonero, vatungamiriri vekushambadzira vanogona kudzidza mashandisiro avanoita zvikamu zvevatengi zvine chekuita nemamwe mapoka evatengi, uye maratidziro avanoita nevateereri ivavo. Vatengesi vanogona kuongorora iyi data revhiki kupfuura vhiki uye kuronga marongero ekushambadzira vachipesana nezvikamu zvakanangana nevatengi vavo.
Vateereri Insights dashibhodhi vanopindura mibvunzo seiyi:
Ndeipi kukosha kwevateereri ava? Iko kutarisa muzana yezvemari yakazara, avhareji odha kukosha (AOV), avhareji nhamba yezvigadzirwa pahurongwa, avhareji kukosha kwehupenyu uye avhareji akafanotaurwa kukosha kwehupenyu
Ndeapi hutano hwevateereri ava? Kuparara kwevatengi vakarasika, vanoshanda uye vari panjodzi
Ndekupi kwandinogona kutaura nevateereri ava? Tsanangudzo yekuti vangani vatengi mune vamwe vateereri vanogona kusvikwa mune yakapihwa chiteshi, senge email, yemagariro, kuratidza kana onsite
Vateereri ava vari kuita sei nezvigadzirwa? Showcases "Rockstars," "Cash Mhou" uye "Hidden Gems" zvigadzirwa
Vateereri ava vari kuita sei newebsite yangu? Nzwisisa zviri nyore zviitiko zvezviitiko, saiti kutendeuka fanera uye zviitiko zvesaiti kuenzanisa
Vateereri ava vari kuita sei nemaemail angu? Kuona kwakadzama kwekutumirwa, kuvhurwa, uye kudzvanywa maemail, pamwe nekuzvinyora zvichienderana nezvikamu zvevateereri
Ndivanaani vatengi vanonyanya kufadza? Kutaridzika kusingazivikanwe kune vamwe vatengi vakaputsika ne "vashandisi vepamusoro," "mabhurawuza epamusoro" uye "kugona kwepamusoro"
Verenga Zvakawanda nezve Vateereri Kunzwisisa
Tags: kunzwisisa kwevateereribluecorekusarudza-Chaicho nguva
WordPress: Nyora Shortcode Kubva Kumusoro Wevabereki MuMwana Wako Dingindira